Ibhukwana lomsebenzisi le-Galaxy Tab S3 lihlungiwe | Izindaba zamagajethi
I-Galaxy Tab S3 yomsebenzisi iyavuza
Phakathi nalawa masonto edlule besilokhu sishicilela izindatshana ezahlukahlukene lapho besikukwazisa khona mayelana nokucaciswa okungenzeka kuthebhulethi elandelayo yakwa-Samsung, i-Galaxy Tab S3. Imakethe yethebhulethi iyaqhubeka ukwehla, kepha yize kunjalo, abenzi bayaqhubeka nokubheja kule divayisi. Umenzi okwamanje osinikeza ukuhlukahluka okukhulu kwalolu hlobo lwedivayisi yi-Apple enamamodeli akho konke ukunambitheka, izidingo nosayizi, yize bekungeyokugcina ukwethula ipeni elihambisana namathebulethi, i-Apple Pencil, ipensela elihlakaniphile elithola ingcindezi yokulandela ngomkhondo nge-latency encane.
Kepha okhethe ngempela isitena sevithamini kwakuyi-Galaxy enebanga leNothi, ipeni elibhabhadisiwe negama elithi S-Pen elalilokhu likhula kancane kancane liye kumadivayisi esikrini amakhulu njengamathebulethi. Izinsuku ngaphambi kokwethulwa kwe-Galaxy Tab S3, izithombe zebhukwana lomsebenzisi zisanda kuhlungwa, lapho singabona ngokuningiliziwe konke ukuxhumana kanye nendawo yezakhi ezahlukahlukene lokho kuzoba yingxenye yalesi sizukulwane esisha se-Samsung.
Njengoba sikwazi ukubona, le thebhulethi izofaka phakathi inzwa yezigxivizo zeminwe, uxhumano lwe-USB Type C, i-flash yekhamera netheku ukuxhuma ikhibhodi njengezinto ezintsha ezisemqoka. Esingakuboni kuyislothi lapho ungafaka khona i-S Pen, into enengqondo lapho ubheka ukuthi, kuye ngokuthi yakhiwe kanjani, izofika nesiqeshana sokunamathisela ehembe, ibhulukwe noma ikesi elihambisana nale divayisi, into ingafinyelela enkingeni uma ukuzibamba kwakho kungafanele ngokuphelele. Lo mshini uzokhishwa ngokusemthethweni ngoFebhuwari 26 ngohlaka lwe-Mobile World Congress oluzobanjelwa eBarcelona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » I-Galaxy Tab S3 yomsebenzisi iyavuza
Yeka inkumbulo embi onayo noma ukuthi unolwazi olungelona iqiniso kanjani! Ngaphambi kokuthi i-Apple ikhiphe i-iPad Pro yayo ngisho nangaphambi kokuvela kweMicrosoft, abakwaSamsung base bevele bekhiphe izingcingo zabo zeGalaxy Note (amamodeli ayisithupha kuze kube manje, noma ama-6 uma singabala i-Note 5 fiasco) namathebulethi (amamodeli ama-7) kusukela ngonyaka ka-5. Angazi noma ngabe iSamsung ibingeyokuqala yini ukukhipha enye into ngaphandle kwezinduku zakudala zepulasitiki njengaleyo ebiphethwe yiNokia 2011 XpressMusic ngo-5800 noma ama-PDA akudala kusukela ngo-2008, kodwa yakwenza kudala ngaphambi kuka-Apple (2000) noMicrosoft (2015)
Ibanga elilandelayo le-HTC maphakathi livela kwezinye izithombe ezivuzekile
Imoto yokuqala ezimele iRoborace iphelela engozini